Nei Uchifanira Kudzivirira Yako Webhusaiti ne SSL Chitupa kubva kuSemalt
Kufunga dzese nzira dzaungasimudzira iyo SEO kukosha kwewebsite yako? Kunyange isu tine chokwadi chekuti iwe unofanirwa kunge wabata michero yese-yekurembera nechekare, pane chinhu chimwe chinowanzovhiringidzwa. Uye iyo webhusaiti data encryption.
Mune mamwe mazwi, kuiswa kwegwaro reSSS pane webhusaiti yako iyo inosimudzira yakachengeteka, yakavharidzirwa kubatanidza kune vashandisi vako uye data ravo. NaSemalt, iwe unogona kuve nechokwadi kuti kutaurirana kwese pane yako webhusaiti kwakachengetedzwa uye kwakachengeteka. Zvitupa zvedu zveSERL zvisingadhuri zvinoshandiswa zvakanyanya kumawebhusaiti izvo zvinoita kuti zvive zvakachengeteka, zvinoshamwaridzana neGoogle, uye zvakakurumbira.
Kuve neiyo yakasimba HTTPS encryption inogona kuva nzira huru yekutora yako webhusaiti SEO level kwete notch yakakwirira mumaziso einjini dzekutsvaga. Kunyanya saka kana webhusaiti yako ichiita nemabhadharo (semuenzaniso: ngoro yekutenga).
Ngatitarisei zvakadzama kuti nei SSL iri chinhu chakakosha mune SEO muna 2020 uye kupfuura.
Chii chinonzi SSL Chitupa?
Tisati tapinda mune zvekufungidzira, ngatitangei kunzwisisa kuti chii chinonzi SSL chitupa. Kana iwe uri mutsva kune mawebhusaiti, mubvunzo unonyanya kukosha ungave uri: chii kunyorera webhusaiti? Kana, zvinorevei kuti HTTPS?
Mhinduro yacho iri nyore. SSL, iyo inomirira Yakavanzika Maseketi Layer, ndeye internet kuchengetedzwa protocol iyo inobvumira kuiswa kwe data, chokwadi, uye kutendeseka kwedatha mumawebsite emazuva ano. Iyo inoshandura yeyakajairika hyperocol transfer protocol (HTTP) kuita imwe yakachengeteka (HTTPS), ichipa kuchengetedzwa kune yako data nekuvimbika kune vashandisi vako. Chero chero chidimbu cheruzivo chinofamba kuburikidza newebhusaiti yako chakavharirwa kuitira kuti chisave chakabiwa kana kuvhiringidzwa nacho panguva yekuzvitakura.
SSL inogona kuiswa pane webhusaiti setifiketi (iri musanganiswa wemakodhi) inogadzirwa nemupi wese seSemalt. Iyi setifiketi yeSSL inokanzura data rese iro rinopinda nekubuda mu webhusaiti yako. Izvi zvinoita kunyanya zviito zvitatu:
Encrypting data rese
Kutanga chirongwa chechokwadi chechokwadi pakati pemidziyo (komputa yako nedura) kuratidza kuti zvigadzirwa izvi ndizvo zvavanoti ndizvo
Digitally saina iyo data yekuzivikanwa kuzivikanwa kumigumo miviri.
Mukuchengetedzeka kwepamhepo, izwi rehunyanzvi reSSL ndeye TLS, iyo inomira Yekufambisa layer Security. Ndiyo mutsivi weiyo yekutanga SSL 3.0 protocol yakavambwa muna 1996. Nhasi, zviri nani kuzivikanwa seSSL / TSL encryption. Google inofarira kuidana kuti HTTP pamusoro peTLS kana kungoti HTTPS.
Semuenzaniso, kana mushandisi akashanyira webhusaiti yako uye anopinda yavo kadhi rechikwereti ruzivo pane Checkout peji, iyo dhata inofanira kunyorwa zvakanaka. Nechitupa cheSSL, unogona kuve nechokwadi kuti chakadaro. Izvi zvinochengetedza mushandisi wako zvakakosha ruzivo rwemunhu pamwe nemapurojekiti yako saiti yakavimbika. Kuita kuti vashandisi vako vadzoke uye vatapure zvakare zvakare gare gare nguva.
Chitupa cheSSL ichi zvakare chinopa iyo girini yekuvhara chiratidzo pakutanga kwe URL pane Google Chrome neMozilla Firefox. Kubva zvatatanga, Semalt akashandira mazana evatengi pasi rese. Vese vatengi vedu vanovimba nechero rimwe rezvitatu SSL zvitupa zvatinopa. Iyo Premium package (iyo inotsigirawo subdomain) ndeyezvisikwa mutengesi wedu akanakisa pakati peSSL / TSL chitupa chinopihwa.
Izvo zvinotibatsira kuti vashandi veSemalt vazive mitauro yakati wandei seChirungu, French, Russian, Ukraine, Italian, Italian, pakati pevamwe. Izvi zvinobatsira mukutaurirana zviri nani uye zvinotibatsira kupa masevhisi akanakisa kune vashandisi vedu.
Mufananidzo 1 - Chiratidzo chakachengetedzeka muGoogle Chrome
Iye zvino zvauri iwe uine zano rakanaka rekuti zvingaitirwe encryption yewebhu webhusaiti uye yako vashanyi vewebhu, ngatitarisei kubva kune iyo SEO angle.
Nei seSitifiketi yeSSL Yakakosha kune yako Webhusaiti SEO?
PaSemalt, kuve premium SEO masevhisi ekupa uye yakazara yehuwandu yekushambadzira dhizaiti, isu tine runyararo rwakanyanya pamusoro pezvigadzirwa zvekuchengetedza. Yedu SSL setifiketi inopa ndiyo imwe yadzo, iyo inogona kukubatsira kukurudzira iyo SEO webhusaiti yako.
Takatodzidza kuti kuvepo kweSitifiketi yeSSL / TSL pane yako webhusaiti kunogona kukubatsira sei. Izvo hazvingochengetedze yako webhusaiti seyakachengeteka chombo asiwo ichadzivirira ruzivo rwevashandisi vako. Asi kupfuura izvozvo, zvichabatsira mukutsvaga kwako injini yekushandisa (SEO) kuedza. Ngatitsvagei kuti sei.
Google Inokurudzira HTTPS
Muna 2014, Google yakazivisa kuti ichatanga kufunga 'zvakachengetedzeka, zvakabatanidzwa zvakabatana sechiratidzo mune yayo yekutsvaga mazita algorithms'. Kwemakore matanhatu kubvira ipapo, Google yakawedzera huremu hwayo kune SSL / TSL encryption zvakanyanya zvekuti nhasi inokanganisa zvikuru mibvunzo yekutsvaga, uye kunyanya iya inotsamira pakutengeserana kwemari. Ecoommerce mawebhusaiti, ekubhadhara magedhi, uye masocial network ndiyo mienzaniso yemhando dzewebsite dzinoda encryption. Izvi zvinodaro nekuti vanobata ruzivo rwewemunhu sewe kadhi rechikwereti, nhamba dzekuchengetedza munharaunda, uye humbowo hunhu hwekuziva. Semuenzaniso, kana iwe uine rako rekudonha bhizinesi, SSL inofanira kunge iri pamusoro peyako SEO yekutarisa.
Dzimwe injini dzekutsvaga dzakaita seBing neYandex dzakatangawo kushandisa encryption yewebsite sechiratidzo chakajeka chekumira zvirinani.
Maringe neGoogle's Transparency Report , 88% yemapeji ewebhu akatakurwa paGoogle Chrome pasi rese (kuburikidza neWindows desktop) muna Kubvumbi 2020 akaiswa neHTTPS. Icho chiverengero chakakura nekuti Chrome ichine iyo yepamusoro-soro uye yepamusoro chikamu chemusika pakati pewebhu mabhurawuza.
Mufananidzo 2 - Iperesenti yemapeji akatakurwa pamusoro peHTTPS muC Chrome
Mushumo mumwe chetewo unoratidza kuti nharembozha dzinozvidavirira kune yakawanda yevasina kunyoreswa mushandisi traffic. Izvi zvinoratidza kuti pane nzvimbo yakakwana yekuvandudza mawebhusayithi akatipota. Wako mumwe wavo here?
Nezvo izvo, heano mamwe einongedzo kubva kuGoogle pane chikonzero nei HTTPS yakakosha:
Inodzivirira kubva kuneavesdroppers uye vanoba
Dzivirira kurwiswa kwe cyber
Inovandudza kutendeseka kwedata
Zviite seyakamira kuchengetedza system kunyange kana software neyekuchengetedzeka kwemahara zvingave zvisina kukwana
Iyo webhusaiti ine SSL / TSL encryption inosaina injini dzekutsvaga iyo inotora ruzivo rwevashandisi uye kutendeseka kwedata zvakadzama. Pamwe nezvimwe zvinhu zvakadai sezvakakodzera zvemukati, zvemukati silo, yakasimba yekubatanidza mukati, uye yakakwirira-chiremera backlinks, kunyorera kwakabudawo sechinhu chakakosha che SEO kugadzirisa.
Sezvo iwe unotoziva iwe, SEO ndeye zvese nezvekuvandudza kuoneka kwewebsite yako pane yekutsvaga organic. Nekunyorera sechinhu chakakosha, iwe unogona kungoisa setifiketi yeSSL yemubhadharo mudiki uye kubuda kunze kweboka revanhu vasina kunyorwa, vasina-HTTPS mawebhusayithi kunze uko.
HTTPS Inogona Sei Kuvandudza SEO?
Kana iwe uri mushambadzi wepamhepo, iwe unotoziva kuti hapana chiito chine chekuita nekukurumidza paSEO. Iwe unogona kugadzirisa yese yako webhusaiti zvemukati uye mepu yega peji kune imwe yakakosha izwi. Uye injini dzekutsvaga dzicharamba dzichitora nguva yekugadzirisa zvakare index, cache, uye tarisa ako mapeji ewebhu ezvekugadziriswa zvirinani.
Zvinozivikanwa kuti hapana chinogona kusimudzira mashura ako SEO masosi usiku humwe. Izvi ndizvo zvakaitikawo nekuita HTTPS kuwebhusaiti yako. Iwe haufanirwe kutarisira kuti webhusaiti yako ive neyakajeka kumira pane organic yekutsvaga injini peji mhinduro (SERP) nekungoisa chitupa cheSSL / TSL. Kana zviito zvako zvakawanda zvikaungana pamwe chete kwenguva, unogona kutanga kukohwa iwo mabhenefiti.
Mufananidzo 3 - Aya ndiwo maitiro asiri webhusaiti yeHTTPS kumushandisi
Muenzaniso mukuru uyo uchakupa mufananidzo wakajeka ndouyu: funga iyo TSL yakavharirwa webhusaiti yeSemalt uye webhusaiti isina kunyorwa yewebsite yemakwikwi. Kana iwe uchitsvaga yakakodzera dhijitari yekushambadzira musoro, uye aya mawebhusaiti maviri ari kukwikwidza nekuda kwepamusoro chinzvimbo, saiti yaSaltalt ichakwira kumusoro. Sei?
Nekuti Semalt haisi kungoita zviri nani, yakakodzera zvemukati nezvenyaya yauri kutsvaga asi zvakare ine iyo SSL satifiketi yakaiswa. Nenzira, inongova imwe yezvinhu izvo zvinjini zvinotsvaga zvichashandisa kuenzanisa mhedzisiro dzakasiyana dzemubvunzo.
Kana iwe uchida kukweva kumira kwese mukusundidzira webhusaiti yako pamusoro pekutsvaga kwe organic, kuisa SSL / TSL chitupa ndechimwe chezvinhu zviri nyore kuita. Zvese zvinotora ndezvekuti iwe utenge zvitupa zvinoenderana nezvaunoda, uye zvakanaka kuti uende.
Nzira yekuisa sei SSL Chitupa neSemalt?
NaSemalt, kuisa SSL chitupa pane webhusaiti yako zviri nyore sekutenga pamhepo. Iwe unogona kuenda kune yedu SSL zvitupa peji uye sarudza kubva kune imwe yehurongwa utatu. Vari:
Basic - Chekuisa chete, hapana chitupa
Yero - Yakanaka SSL kubva kuComodo pamwe nekuiswa
Premium - Yakanyanya-kutengesa Positive SSL Wildcard nerutsigiro rwe subdomains uye kuiswa
Sezvataurwa pamusoro, chirongwa chedu chePrimum chakakurumbira pakati pevatengi vedu varipo. Iyo inovapa kunetseka-isina-setup kuitira kuti vagone kutarisa pane zvakakosha mabasa sewebhu zvemukati uye maneja manejimendi.
Kana uchinge wasarudza chirongwa chakakodzera, ita kuti utenge kuburikidza nechengetedhi uye rakachengeteka gedhi rekubhadhara. Paunenge uchinge watenga, unogona nyore kubatanidza webhusaiti yako nebasa redu uye kushandura webhusaiti yako yakachengeteka. Kana iwe ukatarisana nenyaya dzipi nedzipo panguva yekuseta chikamu, yedu yekuchengetedza vatengi ichakutungamira uye kupindura zvaunobvunza.
Semalt's SSL / TSL zvitupa zvinokwanisa kukupa zvinhu zvishanu zvakakosha mune yako yedijiti yekushambadzira rwendo. Vari:
Yakakwirira kuchengetedzeka kwewebsite yako
Instant green akachengeteka chiratidzo muGoogle Chrome uye mamwe mawebhu mabhurawuza
Kuchengetedza zvakavanzika kune vako vashandisi vewebhu
Yakakwira yakawanda yeiyo organic web vashanyi kubva kune yekutsvaga injini
Sezvakacherechedzwa nevanoverengeka vatengi vedu vekare uye varipo vatengi, kuisa SSL zvitupa kunogona kubatsira iwe kushandura webhusaiti yako muchivande portal iyo vashandisi vako vanogona kuvimba nekugara vachibata nayo.
Usarega vatengi vangangotendeuka kubva pawebhusaiti yako mushure mekutarisa chiratidzo 'chisina kuchengetedzeka' paGoogle Chrome. Uya navo nechitupa cheSemalt SSL nhasi. Dzvanya apa kutenga imwe ikozvino.